दाईलाई राखि लगाइदिने बिनाको सपना अधुरै, बिना सहित परिवारको चारै जनाकाे पहिरोले लियो ज्यान! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > दाईलाई राखि लगाइदिने बिनाको सपना अधुरै, बिना सहित परिवारको चारै जनाकाे पहिरोले लियो ज्यान!
admin August 2, 2020 August 2, 2020 Uncategorized 0
गुल्मी । लगातार नेपालभर नै परेकाे बर्षाले गुल्मीको वम्घा वोटेमाझी गाउँमा शुक्रवार ज्यान गुमाएकी ३० वर्षीया विना वोटेमाझीको दाईलाई राखि लगाइदिने सपना पनि पुरा हुन पाएनन् । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतमा छन् । उनको नेपालमा ३ छोराछोरी सहित पहिरोमा परेर ज्यान गयो । उनी नजिकैकाे छिमेकी प्रेमबहादुर घर्तीलाई दाई बनाएकि थिइन् । उनी दाईको घरमै दिनहुँ सांझ टिभी हेर्न जान्थिन् ।
‘संधै राती १० वजे सम्म टिभी हेरेर बस्ने उनी शुक्रवार भने साँझ ६ वजे नै खाना पकाउनु छ भन्दै गएको दाई प्रेम बहादुरले भने । बहिनी गएपछि त्यसको १५ मिनेट नहुँदै माथिबाट ठुलै ढुङ्गा खस्यो ।
त्यो ढुंगाले रुखको हाँगा भाँचेर प्रेमबहादुरको घरमा पनि छोयो । हाँगा भाँच्दै मेरो ट्यालमा खसेर भत्काइदियो । उनले भने, मैले हेर्दा हेर्दै त्यो ढुंगा उनीहरुो छानामा गएर बज्रियो । उनी हतारिदै बहिनीको घरमा पुगेर हेर्दा उनकी १० महिनाकी छोरी आमाको स्त’न चुसेकै अवस्थामा देखेको थिएँ । चारै जना आमा छोरा छोरीको शव एकै ठाउँ थियो ।
एकै छिन अघि प्रेमबहादुरको घरवाट हिड्नु अघि उनले रक्षा वन्धन कहिले हो भेली खैरेनी पात्रो हेराउन जान्छु र दाइ (प्रेमबहादुर घर्ती) लाई राखी बान्धिन्छु भन्दै गएकी थिइन् । अहिले दाई बहिनीले भनेको त्यही कुरा झलझली सम्झिरहन्छन् । भारतमा रहेका श्रीमान राजु वोटेमाझीलाई फोन गर्न उनी त्यो दिन आफ्ना दाईको घरवाट छिटै निस्केकी थिइन् ।
एक वर्षअघि भारत हिडेका श्रीमानसँग १० वर्ष अघि उनले प्रेम विवाह भएको थियो । पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा सागर, ७ वर्षीय अर्का छोरा हेमन्त र १० महिनाकी छोरी विनासहित चारै आमा छोरा छोरीको ढुङ्गा घरमा खसेर एकै ठाउँ ज्यान गयो ।
ज्वाला सङ्ग्रौलालाई थुन्न अदालतबाट म्याद थपिँदै, अर्को उजुरी पनि आज नै
क्वारेन्टाइनबाट युवती बेपत्ता !